Ny Vola 60 Tapitrisa Dolara avy any Washington Ho Fampiroboroboana ny Demokrasia Rosiana dia ‘Fandrisihana Amin’ny Ankapobeny’ · Global Voices teny Malagasy
Ny Vola 60 Tapitrisa Dolara avy any Washington Ho Fampiroboroboana ny Demokrasia Rosiana dia ‘Fandrisihana Amin'ny Ankapobeny’
Voadika ny 20 Desambra 2014 4:07 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Català, Türkçe, Español, English
Fihaonan'i Obama sy Putin ivelan'i Moskoa, 7 Jolay 2009. Saripika Ofisialin'ny Trano Fotsy avy amin'i Pete Souza.
Nandany lalàna vaovao omaly i Etazonia izay nantsoina hoe “Lalàna fanohanana ny Fahalalahana ao Okraina.” Androany, nahamarika fiteny ao amin'ny lalàna ny seha-pampahalalam-baovao Rosiana sasantsasany fa misy ny vola 60 tapitrisa dolara atokana hampiroboroboana ireo “fikambanana fiarahamonim-pirenena sy fikambanana demaokratika” Rosiana , ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ny “fampivelarana ny fidirana tsy misy sivana ny aterineto.”
Tsy isalasalàna fa mampientanentana, na dia mampidi-doza aza, azon'ny mpikatroka maro ao Rosia sy ireo mpanoratra gazetey miasa an-tserasera araraotina ny fidirana mankany amin'ny vola 60 tapitrisa dolara avy amin'ny fitantanam-bahoaka ao Etazonia. Tahaka ny tsy ho azo mihitsy anefa io vola io.
Ny lalàna dia “fahazoan-dalana hahazoana maka” fotsiny ihany, tsy tena volavolan-dalàna maka azy tokoa. Amin'ny teny hafa, manome marika amin'ny fanohanany handaniana io vola io fotsiny ihany ny Kongresy sy ny filoha. Raha tsy misy ny fakàna [vola] miaraka aminy, dia tsy tena miasa ho vola fanampiny hampiroboroboana ny demaokrasia ao Rosia ny Lalàna Fanohanana ny Fahafahana ao Okraina.
Nilaza tamin'ny Akon'ny RuNet ny loharanom-baovao avy amin'ny fikambanana mpampiroborobo ny demaokrasia ao Washington, “Ny fitenin'ny fahazoan-dalana dia fandrisihana amin'ny ankapobeny, ary tsy manantena ny vokany ho fakana ho fananana vaovao ny seha-mpampitam-baovao Rosiana na ny firaisamonim-pirenena Rosiana.”